‘वीर विक्रम फेरि’ बनाउँदैछन् मिलन चाम्स ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
‘वीर विक्रम फेरि’ बनाउँदैछन् मिलन चाम्स ?
निर्देशक मिलन चाम्सलाई चलचित्र बनाउने मेशिन भन्ने गरिन्छ । एउटा चलचित्र निर्माण नहुँदै उनले नयाँ चलचित्रको घोषणा गरिहाल्छन् । अहिले उनको पाइपलाइनमा चार चलचित्र छन् । कोरोना महामारीपछि उनी एउटा चलचित्रको छायांकन सुरु गर्ने सोचमा छन् । केही दिन अगाडि उनले अभिनेत्री साम्राज्ञी आरएल शाहसँग एक चलचित्रका लागि कागजी सम्झौता गरेका थिए ।
अहिले निर्देशक चाम्स दशैंपछि ‘वीर विक्रम ३’ को छायांकन थाल्ने तयारीमा रहेको चर्चा चलेको छ । यस विषयमा उनी भन्छन्, ‘मैले इच्छा देखाएको चाहिँ होइन । अरुबाट नै ‘वीर विक्रम’ जहाँ अन्त्य भएको थियो, त्यहीँबाट कथा सुरु गर्ने गरी ‘वीर विक्रम फेरि’ नाममा चलचित्र बनाउने प्रस्ताव आएको छ । तर, मैले तत्काल समय दिन नसक्ने भएपछि कुरा अगाडि बढेको छैन ।’
उनले ‘वीर विक्रम फेरि’ का लागि दयाहाङ राई, अनुपविक्रम शाही, नाजिर हुसेनसँँग एक चरण कुराकानी भइसकेको बताए । चाम्सले भने- ‘खासमा मैले ‘वीर विक्रम २’ लाई सिक्वेलको रुपमा निर्माण गर्न चाहेको थिएँ । तर, कलाकारको समय नमिल्दा नयाँ कथा तयार पारेर चलचित्र बनाएँ । अहिले ‘वीर विक्रम २’ का लागि भनेर लेखिएको कथामा सिक्वेल बनाउन प्रस्ताव आएको छ ।’
आफ्नो व्यस्तताका कारण तत्काल ‘वीर विक्रम फेरि’ बन्ने सम्भावना न्यून रहेको उनी बताउँछन् । ‘अहिले मेरो पाइपलाइनमा चार चलचित्र छन् । स्थिति सामान्य भएपछि यीमध्ये एक चलचित्रको छायांकन सुरु गर्नेछु । यसकारण फेरि अर्को चलचित्र घोषणा गर्ने पक्षमा म छैन । पछि सबै कुरा मिल्यो भने ‘वीर विक्रम फेरि’ बनाउन सक्नेछु । अहिलेलाई भने कुनै तयारी छैन,’ उनले भने ।